डेरामा बस्नुहुन्छ ? यी कुरामा ख्याल गर्नुहोस - Khabar Break | Khabar Break
डेरामा बस्नुहुन्छ ? यी कुरामा ख्याल गर्नुहोस
– भाडा सम्झौता पत्र प्रँयः सधैं स्ट्याम्प पेपरमा नै बनाइन्छ, जसमा घरधनी र भागावाल दुवैको हस्ताक्षर हुनु आवश्यक छ ।
– भाडा सम्झौता पत्रमा घरधनी र भाडावालको नाम पुरा र स्पष्ट रुपमा लेखिएको हुनु पर्छ । भाडामा दिने स्थानको पूरा ठेगना पनि लेख्नु पर्छ ।
– भाडा सम्झौता पत्रमा सही जानकारी हुनु पर्छ, भाडामा दिने समय अवधि र मिति समेत खुलाउनु पर्छ, कुन दिनबाट भाडा लागु हुने भन्ने कुरा पनि प्रष्टसंग लेखिएको हुनुपर्छ ।
– भाडा सम्झौता पत्रमा भाडावालाद्वारा तिर्नु पर्ने भाडाको दर पनि उल्लेख गरिएको हुनु पर्छ । कुन मिति र महिनाको शुरुआत अथवा अन्त्यमा भाडा कहिले तिर्ने र कति समयको लागि घरभाडामा दिने त्यो पनि खुलाउनु आवश्यक छ ।
– भाडावालालाई घरधनीले के-के सुविधा प्रदान गर्ने हो, त्यसको जानकारी पनि भाडा सम्झौता पत्रमा खुलाउनु पर्छ । कोठासंगै अन्य के-के सामाग्रीहरु प्रदान गरिने हो त्यो पनि उक्त पत्रमा लेखिएको हुनु पर्छ ।
– भाडावालाले घर छोड्नु परेमा अथवा घरधनीले कोठा खाली गराउनु परेमा एक महिना अगाडि नै जानकारी दिनु पर्ने कुरा पनि उक्त सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिनु पर्दछ ।
– घरधनीले भाडा सम्झौता पत्र बनाउनका लागि कुनै वकीलको सल्लाह पनि लिन सक्नेछन् ।
– घरधनीले भाडावालाको बारेमा सोधपुछ गर्न सक्नेछन्, जसका कारण भाडावालासँग सम्बन्धित सामाजिक गतिविधिहरु र अपराधिक पृष्ठभूमि छ भने पनि थाहा हुन्छ ।
– भाडा बस्ने र भाडा प्रयोग गर्नेको १८ वर्ष भन्दा माथिका विवाहित तथा अविवाहित सबै सदस्यहरुको नाम उक्त पत्रमा लेख्नु पर्छ । त्यसो गर्दा सबैलाई घरको रेखदेख र जिम्मेदारी दिन सहज हुन्छ र भाडाको पैसा पनि कोहि एकबाट उठाउन सकिन्छ ।